Deg Deg: Macalin M. oo ku adkeystay in Dh/mareeb hoostimaado Al Sunna iyo Kheyre oo aqbalay - Muqdisho Online
Home Wararka Deg Deg: Macalin M. oo ku adkeystay in Dh/mareeb hoostimaado Al Sunna...
Waxaa maanta iyo ilaa caawa goordanbe ka socotay magaalada Dhuusamareeb dood culis oo u dhaxeeysay Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Galmudug Xasan Kheyre madaxa Al Sunna Macalin Maxamud.
Kheyre ayaa dhowr asbuuc ka hor ku dhawaaqay in magaalada Dhuusamareeb ay la wareegaysto dowlada fedaeaalka. Go’aankaan ayaa yimid ka dib markii uu Kheyre heshiis hoose la galay Shiikh Shakir.
Go’aankaan ayaa waxaa ka horyimid Macalin Maxamuud oo si deg deg ah ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb ka dib markii loo sheegay go’aanka uu Kheyre ku dhawaaqay. Macalinka ayaa ku adkaystay in marnaba ayan Al Sunna Wajameeca ogolaan doonin in ay dowlada fedraalka ku wareejiso ciidankeeda gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb.
Xasan Kheyre oo ay albaabada ka soo xirmayn ayaa dib ugu yeeray Wasiir Sabriye kama codsaday in uu dib ugu soo noqdo Dhuusamareeb si uu u qanciyo Macalin Macamuud. Sabriye oo maanta dib ugu soo laabatay ayaa ku guuldaraystay in uu ku qanciyo adeerkiis in uu ogolaado in dowlada fedraalka la wareegto Dhuusamareeb.
Shir saacado socday ka dib ayaa caawa waxaa uu ogolaaday Xasan Kheyre qodobadaan:
in gabi ahaanba ciidanka booliiska ee la wareegayo amaanka Dhuusamareeb ay ka imaanayaan kooxda Al Sunna Wajameeca. Tass oo macabaheedu tahay in Al Sunna looga danbeeynayo amaanka Dhuusamareeb.
Kheyre ayaa ku dooday in hadii Al Sunna la wareegtay ciidanka booliska, ciidanka Nabad suguda NISA ay keensato dowlada dhexe. Codsigaas waa lagu diiday… dood dheer ka dib ayaa Macalin Maxamuud waxa uu ogolaaday in 40% ay dowlada dhexe keento NISA laakiin taliyaha ciidanka uu ka yimaado Al Sunna..60% waxa ay ka imaanayaan Al Sunna
In Xasan Kheyre loo ogolaado in uu sheegto in ciidanka dowlada lagu wareejiyay magaalada Dhuusamareeb si uu wax u eg guul u sheegto. Macalin Maxamuud ayaa ku yiri Kheyre “hadii aad been sheegeyso adiga ilaahaaga ayay idinka dhaxeeysaa”.
Kulanka ayaa la filayaa in caawa la soo afjaro si Xasan Kheyre si dhaqso ugu noqdo magaalada Muqadishu.
Macalin Maxamuud ayaa ku baraarugay qorshaha fog ee Kheyre ka damacsan yahay Galmudug taas ayaana keentay in uusan marnaba ka tanaasulin xajinta magaalada Dhuusamareeb.
Kheyre ayaa galabta waxaa uu qado u smaeeyay waxgaradka reer Dhuusamareeb si ay culays u saaraan Macalin Maxamuud laakiin qorshahaas waa faashilmay.
Dhanka kale Wasiir Sabriye ayaa isgana caawa gacanta ka taagay qorshaha kheyre. Waxaa uuna kheyre ku baraarujiyay in uu ogoloado waxa yar ay Al Sunna ogoshahay hadii kale iyada oo wax lahaynin ayaa lagu kala tagayaa Dhuusamareeb.
Ugu danbeeyntii beelaha ka soo jeeda Galmudug oo cabsi ka qabay in ay tagaan Dhuusamareeb ayaa waxa hada u sii cadaatay in ayan marnaba suuragal ahaynin in ay tagaan Dhuusamareeb, Taas oo adkeyn doonta in shir ka dhaco dhuusamareeb.
Kheyre ayaa gudi been abuura magacaabay si uu uga dhexbaxo balaayada uu ka dhex abuuray dadka reer Galmudug, isaga oo qorshahiisu yahay in uu gudigaas eeda fashilka dusha ka saaro.
Previous articleMuxuu Farmaajo isku soo beegay maalintii xasuuqii waqooyi iyo magacaabista Gudiga (Daawo)
Next articleRW Kheyre oo magacaabay guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta Galmudug